Madsonic: Ku rakib Server Muusikada Daabac on Raspberry Pi | Laga soo bilaabo Linux
ciroland | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Casharradan waxaan ku sharaxayaa sida loo rakibo server qulqulka muusikada (madsonic) Raspberry Pi con ArchLinux ARM.
Si aad u aragto casharro ku saabsan sida loo rakibo Arch Linux on Raspberry Pi waxaad ka eegi kartaa tan post.
Waxaa lagugula talinayaa inaadan ku dhejin jawi garaaf ah Raspberry Pi, maadaama ay isticmaasho xusuus badan. Taabadalkeed, waxaa fiican inaad had iyo jeer ku shaqeyso adoo isticmaalaya isku xirnaanta ssh.
Astaamaha ugu muhiimsan ee madsonic waa kuwan soo socda:
Taageerada transcoding in qaabab kala duwan (Ex. FLAC> mp3)
Waxay leedahay macaamiisha Android iyo iOS
1 Xaddid RAM-ka GPU oo beddel abuurka aagga (SWAP)
2 Xirxirid xad dhaaf ah (Ikhtiyaar)
3 Rakibaadda Madsonic
4 Ku rakibidda Java Oracle ee ARM
5 Qaabeynta Madsonic
Xaddid RAM-ka GPU oo beddel abuurka aagga (SWAP)
Tallaabooyinka soo socdaa waa ikhtiyaari, laakiin waxaan kugula talinayaa inaad iyaga u sameyso si looga fogaado Raspberry-ka oo ku socda RAM.
Adeega madsonic wuxuu ka hoos shaqeeyaa Java, sidaa darteed 256MB RAM Raspberry Pi wuxuu isticmaalaa qiyaastii 50% oo RAM ah. Xaaladdan waxaan kugula talinayaa abuurista a bedelka (isku beddel) si looga hortago Raspberry Pi inuu xasuus ka dhammaado.
1. Waxaan abuureynaa fayl loo adeegsan doono aag bedel feyl oo waxaan u qoondeyn doonaa meel dhan 512 MB
2. Waxaan u xilsaarnaa aqrinta iyo qoritaanka rukhsadda faylka.
3. Waxaan u qaabeynaa sidii isku beddel
3. Waxaan dhaqaajineynaa isdhaafsiga
# isweydaarsiga / isweydaarsiga
4. Waxaan kudarnaa qadka soo socda feylka / etc / fstab si kor loogu qaado isweydaarsiga si toos ah.
/ isweydaarsiga feylka midna isma weydaarin isweydaarsiga 0 0
5. Waxaan wax ka badalnaa feylka /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf si qoraalka isku badalashada loo sameeyo kaliya hadii ay dhacdo inaan helno RAM yar oo la heli karo. Waxaan ku darnaa qadka soo socda
6. Isticmaalka amarka lacag la'aan ah waxaan hubinaa qadarka RAM ee aan haysano.
7. Waxaan wax ka badalnaa feylka /boot/config.txt waxay kuxirantahay nooca Raspberry Pi ee aan heysano, si loo xadido qadarka RAM ee loo qoondeeyay sawirada.
LA SOCO! Haddii aan u dhigno RAM aad u yar GPU, Raspberry-ka ma bilaaban doono waana inaan soo bandhignaa SD Card-ka kombuyuutarka si loo hagaajiyo feylka /boot/config.txt
Waxaan u qoondeyn doonaa 64MB oo RAM ah oo loogu talagalay sawirada.
Qaabka Raspberry Pi A (oo leh 256 MB oo RAM ah) waxaan wax ka beddeleynaa qadka gpu_mem_256 = 128 by gpu_mem_256 = 64
Loogu talagalay Raspberry Pi model B (oo leh 512 MB oo RAM ah) waxaan wax ka beddeleynaa qadka gpu_mem_512 = 316 by gpu_mem_512 = 64
Xirxirid xad dhaaf ah (Ikhtiyaar)
Waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho ilo qaboojiye ah si looga hortago Raspberry-ka inuu kululaado
Waanu tafatiri doonaa feylka /boot/config.txt oo waxaan ka xusi doonnaa qaar ka mid ah xulashooyinka kor-dhaafka ah ee laga helay dhammaadka faylka.
Waxaan adeegsaday ikhtiyaarka ugu yar (800 xawaare), xawaareygan my Raspberry Pi Si fiican ayey u shaqeysaa.
Madsonic ayaa ku jira Kaydinta Isticmaalka Arch Linux (AUR), sidaa darteed waxaan u baahanahay xirmada-devel-ka si aan u awoodno inaan uruurino barnaamijyada AUR.
Waxaan rakibnaa xirmooyinka lagama maarmaanka ah:
# pacman -S wget curl base-devel yajl java-runtime libcups
Waxaan u abuureynaa tusaha uruurinta iyo soo dejinta madsonic AUR.
$ mkdir dhis $ cd dhis $ wget https://aur.archlinux.org/packages/ma/madsonic/madsonic.tar.gz
Waxaan soo saareynaa feylasha oo aan wax ka bedelnaa PKGBUILD si loogu daro taageerada processor-yada ARM. Waxaan raadineynaa khadka geedka = ('i686' 'x86_64') waxaana ku darnaa
$ tar zxf madsonic.tar.gz $ cd madsonic $ nano PKGBUILD ... arch = ('i686' 'x86_64' 'armv6h')
Waxaan isticmaalnaa amarka makepkg inaad soo dejiso oo aad soo ururiso nambarka madsonic. Tani waxay qaadan kartaa waqti dheer. Samir yeelo.
Amarka makepkg Waxay soo saari doontaa feyl leh kordhin .xz, feylkaan waxaa lagu rakibi karaa iyadoo la adeegsanayo pacman.
Ku rakibidda Java Oracle ee ARM
Kadib markaan rakibo madsonic waxaan ogaaday taas furanjdk wuxuu adeegsadaa ku dhowaad 100% processor sidaa darteedna tani waxay u taagan tahay waxqabadka liita ee Raspberry Pi.
Xalka dhibaatadan ayaa ah in loo adeegsado Oracle Java qaab dhismeedka ARM. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan mawduucan, waxaad ka hubin kartaa qoraalka oracle halka ay ku muujinayaan Oracle Java vs OpenJDK Benchmark in this link.
Waxaan u soo dejisanaa Java Oracle oo loogu talagalay dhismaha ARM
wget --no-cookies \_ - aan-hubin-shahaado - madaxeed "Cookie: gpw_e24 = http% 3A% 2F% 2Fwww.oracle.com% 2F; \_ oraclelicense = aqbala-aaminka-qabashada-cookie" \_ "http: / /download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u55-b13/jdk-7u55-linux-arm-vfp-hflt.tar.gz "
Furi faylka dariiqa / opt / java-oracle /
Waxaan abuureynaa doorsoomayaasha jawiga Java Home oo aan dib u soo celineynaa OpenJDK Java fuliyaasha.
# JHome = / opt / java-oracle / jdk1.7.0_55 # imtixaan -L / usr / bin / java && mv /usr/bin/java=,.backup}
Waxaan u abuureynaa xiriiriyeyaal astaan ​​u ah java y javac.
Hadda waxaan ku tijaabin karnaa java rakibidda amarka java -version
[eroland @ alarmpi ~] $ java -version java version "1.7.0_55" Java (TM) SE Runtime Environment (dhis 1.7.0_55-b13) Java HotSpot (TM) Macaamiil VM (dhis 24.55-b03, qaab isku dhafan)
Waxaan u saxeynaa feylka qaabeynta madsonic si ay u adeegsato Java Oracle oo aan loo isticmaalin Java OpenJDK.
# /Var/madsonic/madsonic.sh Nano
Oo waxaan wax ka badalnaa qadka JAVA_HOME si ay u tahay sida soo socota:
Qaabeynta madsonic waxaa lagu sameeyaa faylka /var/madsonic /madsonic.sh, waxa ugu horeeya ee aan sameyno waa inaan taageerno.
Faylkan waxaad wax ka beddeli kartaa dekedda ay madsonic isticmaali doonto (asal ahaan waxay isticmaashaa dekedda 4040), jidka galka ay heesaha ku kaydsan doonaan, iwm.
Waxaan ku dari doonaa a Darawal adag oo dibedda ah ku xiran USB halkaas oo aan dhigi doono heesaha si loogu ciyaaro.
Haddii drive-ka adag la qaabeeyo NTFS, waxaad u baahan tahay inaad rakibo xirmada ntfs-3g si aad kor ugu qaaddo diskiga.
Waxaan abuureynaa galka halka Hard Drive-ka lagu dhejin doono waxaana siinay rukhsadaha lagama maarmaanka ah
# mkdir / mnt / Xogta # chmod 775 / mnt / Xog
Waxaan heli dhibic buurta of our Qalab adag
$ ls -l / dev / disk / by-label / wadar ahaan 0 lrwxrwxrwx 1 xidid xidid 10 Dec 31 1969 Xog -> ../../sda2 lrwxrwxrwx 1 xidid xidid 10 Dec 31 1969 PS3 -> ../../ sda1
Xaaladdayda, waxaan xiiseynayaa disk-ka oo leh astaamaha Xogta ee laga helay / dev / sda2
Si kastaba ha noqotee, adeegsiga calaamadda si aad ugu dhejiso saxanka si aad ah looma talinayo, sida haddii calaamadda isbeddelay, saxanka lama dhejin karo.
Waxaan helnaa aqoonsi gaar ah (UUID) ka wadiddeena adag.
Waxaan heli doonaa natiijo la mid ah tan:
[eroland @ alarmpi ~] $ ls -l / dev / disk / by-uuid / wadarta 0 lrwxrwxrwx 1 xidid xidid 10 Dec 31 1969 19F4-1917 -> ../../sda1 lrwxrwxrwx 1 xidid xidid 15 Dec 31 1969 2300 -4E18 -> ../../mmcblk0p1 lrwxrwxrwx 1 xidid xidid 10 Dec 31 1969 58F6AA78F6AA55D2 -> ../../sda2 lrwxrwxrwx 1 xidid xidid 15 Dec 31 1969 b471cde8-2a15-44e7-acce-e9a - / mmcblk2p54511
Waxaan qoreynaa UUID-ka waditaankeenna adag (xaaladdan oo kale 58F6AA78F6AA55D2)
Waxaan kudarnaa qadka soo socda dhamaadka feylka / etc / fstab
UUID = 58F6AA78F6AA55D2 / mnt / Xogta ntfs-3g default 0 0
Xusuusnow inaad beddesho UUID, midda laga helo amarrada kor ku xusan
Waxaan dib u bilawnay Raspberry Pi-ga iyo darawalka adag ayaa si toos ah u kori doona.
Ugu dambeyntii waxaan bilaabaynaa adeegga madsonic:
# systemctl bilaw madsonic.service
Haddii aan dooneyno in adeegga uu si otomaatig ah u bilowdo mar kasta oo uu nidaamku rarto.
# systemctl awood madsonic.service
Iyo voila, waxaan leenahay adeegeena muusikada qulqulka.
Mar adeegii madsonic, Waxaan ka geli karnaa biraawsarkayaga doorbidista cinwaanka IP-ga ee Raspberry Pi oo aan la soconno dekedda 4040, kiiskeyga waa 192.168.17.1: 4040 oo waxaan galnaa iyadoo la adeegsanayo xogta isticmaale = maamul password = maamul.
Gudaha shabakadda waxaan ku dari karnaa isticmaaleyaal cusub waxaanan beddeli karnaa lambarka sirta ah.
Hagaag, tani waa tabarucdaydii ugu horeysay, waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Madsonic: Ku rakib Server Server Streaming Streaming on Raspberry Pi
Ma lihi rasp laakiin hadii server xD ah waligiis ma isticmaashay mediatomb Hadday haa tahay maxaad ii sheegi kartaa marka loo barbardhigo kan? Waxaan isticmaalaa mediatomb, jaleecada hore, iskudhafka madsonic wuxuu siinayaa xD mediatomb a kun jeer, Maxaa aniga xiiso ii leh waxay noqon laheyd inaan ogaado haddii aad ku baahin karto "WAN" iyo haddii ay tahay hab maamuus wanaagsan, maxaa yeelay mediatomb ayaa u oggolaanaya in lagu maareeyo websaydhka laakiin aan lala socon https, iyo sidoo kale ( ilaa iyo hada waxaan helay macmiil kaliya oo loogu talagalay android) Waxaan ku sameyn karaa socodka medatomb iyada oo loo marayo WAN (haddii laga helo taleefanka gacanta inta aan joogo meel kasta oo aan ka ciyaari karo muusigga server-keyga gurigeyga) tan iyo markii aan ka shakisanahay amniga borotokoolka waxaan dhigaa furayaal aan ilaali xiriir kasta oo aan la yeesho inta badan, isla isla medatomb-ka ayaa loo oggol yahay rukhsadaha si haddii qof uu galo uusan u taaban karin wax xD
Waa salaaman tahay, ma aanan isticmaalin mediatomb. Marka laga hadlayo su'aalahaaga, dabcan waxaad ku isticmaali kartaa madsonic adigoo adeegsanaya WAN, waxaan ku isticmaalaa madsonic iyada oo loo marayo WAN oo si fiican ayey aniga ila shaqeysaa. Madsonic wuu oggol yahay isticmaalka https, kaliya waa inaad ku xoojiso feylkaaga qaabeynta: madsonic_https_port = 8443 iyo voila 🙂
Marka la eego codsiyada loogu talagalay android, waxaan adeegsadaa wicitaanka 'ultrasonic', tani waa mid aad u wanaagsan, waxay u oggolaaneysaa in lagu keydiyo heesaha kaydka si loo dhageysto iyada oo aan la xiriirin xD
Ku jawaab eroland
Saaxiib, khibrad noocee ah ayaad ku leedahay Arch ARM? Waxaan ahay isticmaale Arch .. rakibi rasbian. Laakiin waan ku daalay dhibaatooyinka xagga repos. Waxaan rabaa Arch. Ka waran baakadaha aan ku jirin repo rasmi ah. Tusaale ahaan baakadaha AUR, ma la soo ururin karaa?
Maqaal aad u xiiso badan!
Waxaan sameeyay baaritaan deg deg ah si aan u arko macmiilkaaga oo ku jira Android waana arkay in la bixiyay. Ma jiraa bedel bilaash ah?
Waad salaaman tahay, haddii ay jiraan waxyaabo kale oo bilaash ah, waxaan isticmaalaa ultrasonic.
Subsonic waa bahal mana isticmaalo digada Java. Haddii aanan khaldamin, ownCloud ayaa sidoo kale sii deyn kara maqalka & fiidiyaha waana khafiif sare - ugu yaraan marka la barbar dhigo haysashada JVM iyo codsi kale oo culus.
Java waa inuu dhintaa - isla sidii Flash.
Runtii ownCloud waxay leedahay adeeg socodsiin aasaasi ah, faa iidada aan u arko subsonic waa suurtagalnimada transcoding, haddiiba ay heystaan ​​muusig badan oo flac ah tusaale ahaan. Adiguna waad saxantahay, adeegsiga java waa barnaamij culus, sikastaba hada wax dhib ah kalama kulmin isticmaalka 256MB RAM Raspberry.
Hagaag, OpenJDK 7 (maahan 6 sida Oracle muujiso) aad ayuu uga xasilanyahay waxqabadka. Si kastaba ha noqotee, haddii uu jiro nooc aan Java lahayn, hambalyo (ugu yaraan, waa beddel wanaagsan oo loo yaqaan 'Spotify').
Iyo habka, OWnCloud ma u leedahay Streaming?! Waxay durba umuuqataa 4shared.
Waxaan isticmaalaa minidlna, waxba kama cuno waxaadna heli kartaa fiidiyowyo, sawirro iyo muusig waxaanan ka soo qaadayaa aaladda fiidiyaha ee kombuyuutarka ama tv-ga, waxay kaloo siinaysaa suurtagalnimada gelinta bog aad u kooban.
Waxyaabo kale, Madsonic ayaa ah adeegga qulqulka ama qulqulka? «… Madsonic waa webi warbaahineed oo webka ku shaqeeya iyo fargeeto jukebox ah oo loo yaqaan 'Subsonic…'. , Madsonic waxay taageertaa beddelka duulimaadka iyo qulqulka qaab kasta oo maqal ah,… »Ma garanayo inta farqi ee u dhexeeya hal xilli iyo mid kale
Ma hubo waxa ay ku kala duwan yihiin, waxay ila tahay aniga streamer ayaa loo isticmaalay in lagu yiraahdo software-ka wuu awood u leeyahay qulqulka, laakiin waan ku celinayaa, ma hubo xD
Op ah dijo
Waqtigaan la joogo waxaan isticmaalaa Ampache, laga bilaabo Subsonic sidaan ku arkay waa software bilaash ah, shatiga GPL3 laakiin hadaad rabto inaad yeelato astaamaha oo dhan waa inaad ku bixisaa furaha shatiga ee serverka ku xiran subsonic, sida madsonic anigu ma aanan ogeyn , waxay noqon doontaa arrin la tijaabiyo, waad ii sheegi kartaa Maxay tahay faa'iidooyinka aan heli karo haddii aan isticmaalo madsonic halkii aan ka isticmaali lahaa ampache.
Ku jawaab Elop
Haye, madsonic waa fargeeto ah subonic, kaliya madsonic looma baahna in la bixiyo furaha. Marka laga hadlayo Ampache, ma aanan isticmaalin, - mana kuu sheegi karin maxay yihiin waxtarka madsonic ee ku saabsan ampache, google waxaan ka helay xiriiriyahan, laga yaabee inay caawin karto http://www.brunobense.com/2013/04/subsonic_ftw/.